An Asian Tour Operator: Flooded Bago
Photo from Bago Flood (Photo: BBC)
The storm from South China Sea causes torrential rainfalls in the central parts of Myanmar comprising Wan Dwin, Mahlaing and Nwahtogyi townships. It createdaraise of water level in Bago River and exceeded the DANGEROUS LEVEL over this weekend. The result is serious flood in Bago and it's vicinities. The tropical storm called "Lion Rock" is prevailing in South China Sea and it will bring more rain inafew days.
Photo taken from komoethee'sblog
Posted by An Asian Tour Operator at 9/02/2010 10:04:00 AM
Labels: Myanmar, Nature, News
ခွေးလေး ဘောစီး တာ လာကြည့်သွားပါတယ် တိုင်ဖုန်း လိုင်ရွန်းရောခ် ကိုလည်း လေ့လာသွားပါတယ်
4:42 PM, September 02, 2010
ခုတော့ ရေနဲနဲ ကျသွားပြီလို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခ ကြီးလှပါတယ်
ရန်သူမျိုး ၅ ပါး အဝိုင်းခံနေရသလိုပါပဲ
ငယ်ငယ်က ပဂိုးမှာနေတုန်းက ဒီလိုရေကြီးရင်သိတ်ပျော်တာပဲ..
1:22 AM, September 03, 2010
Poisonous Flower said...
4:41 PM, September 07, 2010
မတွေ့ကြာပြီ။ ခရီးလွန်နေလို့ပါ။ ပိုစ်အသစ်တွေ များကြီးနော်။
ခွေးလေးနဲ့ကလေးလေးကို မြင်ရတာ ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ။ ဘ၀တွေလည်း မလွယ်ဖူးနော်။
ဒီခွေးလေးမြင်တော့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေ ပြန်သတိရတယ်။ ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ခွေးကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ သိပ်တည့်အောင် မပေါင်းတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်ကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ (အခုတော့ ဂျစ်ကန်ကန်လူကြီး ?)မဟုတ်ပါဘူးလို့...း)))